Controllers for All, ampiasao ny remote console anao amin'ny iOS | Vaovao IPhone
Juan Colilla | | Fitaovana IPhone, Cydia, Jailbreak
Apple nampiditra tamin'ny iOS 8 ny mety hisian'ny mampiasa mpanera hilalao amin'ny lalao amin'ny fitaovantsika, API izay noraisin'ireo tompona fitaovana iOS tena tsara tamin'ny alàlanay mamela anay hanala ireo fanaraha-maso mikasika ny efijery sy hilalao nefa tsy manelingelina anay ny rantsan-tananay.
Ny iPhone sy iPad farany farany dia tena manana be dia be fikirakirana sary, izay mamela ny kalitaon'ny lalao video hitantsika ao amin'ny AppStore ho tena miavaka amin'ny fitaovana iray manana ireo toetra ireo.
Ho fanampin'izany rehetra izany, raha ampiantsika ny sary sy ny fampisehoana azo tanterahina miaraka amin'ny APIMetal ny iOS 8 natokana ho an'ny fitaovana misy maritrano 64-bit, dia efa niresaka teny lehibe kokoa izahay.
Mba hankafizanao izany rehetra izany dia mila gamepad misy Bluetooth fotsiny ianao, izay mampifandray tsy misy tariby amin'ny telefaonintsika ary mampita ny baikontsika amin'ny fotoana tena izy amin'ireo lalao namboarina tamin'ity API ity, saingy tsy dia tsotra loatra izany, ny gamepads voamarina MFi manodidina ny vidiny avo eo anelanelan'ny € 30 sy € 90, zavatra heveriko (izaho sy ny olona maro) avo loatra ho an'ny knob tsotra ary izany koa dia mirona amin'ny fisehoana mahatsiravina sy endrika hafahafa.
Na izany aza, maro ny olona manana Controller Bluetooth ao an-trano, noforonina fantastically ho fanaraha-maso tonga lafatra, miaraka amin'ny singa kalitao sy endrika fanta-daza; Miresaka momba ny Sony DualShock 3 sy 4, ny fifehezana ny Playstation 3 sy 4 tsirairay avy.
Ny olana dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy ireo amin'ny alàlan'ny micro-USB ireo fifehezana ireo ary tsy vonona ny hanaiky olona hafa ankoatry ny console. Saingy vintana fa misy vondron'olona mpandrindra lehibe vonona hanao na inona na inona ary manana hevitra lehibe, amin'ity tranga ity, ny iray amin'izy ireo dia Controllers ho an'ny rehetra.
Mba hampifangaroana ny lavitra amin'ny fitaovan'ny iOS anao dia tsy maintsy ampidininao ny programa mifanaraka amin'ny rafitra fiasanao, na Windows, OS X na Linux.
Raha vantany vao alaina sy apetraka ny programa OS anao dia tsy maintsy ampifandraisinao amin'ny PC na MAC ny DualShock ary ampidiro ny adiresy Bluetooth an'ny iPhone / iPod / iPad anao amin'ny programa izay hitanao ao amin'ny "Settings> General> Information", vantany vao vita ity dia ho lasa fitaovana iOS ny mpampiantrano.
Controller ho an'ny rehetra Izy io dia tweak izay ho hitantsika amin'ny Cydia mifanaraka amin'ny iOS 7 sy iOS 8 amin'ny vidiny € 1, azo antoka fa mora lavitra noho ny Gamepad MFi ary azo antoka fa mihoatra ny kalitao ny DualShock antsika (indrindra ny Dualshock 79 izay misy takelaka iray. tactile).
Etsy ankilany, tsy ny zava-drehetra dia vaovao mahafaly, ary na dia hevitra tsara dia tsara aza ny API, tsy ny lalao rehetra no novaina ho azy, na ny Modern Combat 5 aza dia zavatra iray izay mamela zavatra be dia be maniry amin'ny lalao miaraka amin'io haavo io.
Soa ihany fa misy fampiharana manana nanao katalaogy ny lalao rehetra mifanaraka amin'ny mpanara-maso MFi, ity dia hanamora ny asa rehefa mitady lohanteny azo lalaovina.
Mazava ho azy fa manana an'io fomba io fanelingelenana kelyInona no ataontsika amin'ny iPhone rehefa milalao isika? Amin'izay lafiny izay dia tsy tokony hatahotra ianao, orinasa maro no mahalala fa ampiasaina hifehezana ireo fifehezana ireo ary nametraka adaptatera ho an'ny vidiny ambany indrindra (hatramin'ny € 10).
Para zezika roa 3 Manana ireto safidy 2 ireto izahay izay handrakotra ny karazana smartphone rehetra:
1. adaptatera misy kapoaka suction amin'ny € 10 (mety ho an'ny telefaona misy lamosina vera na fitaovana malama tsy misy poria):
2. adaptatera halava azo ovaina amin'ny € 8 (mety amin'ny telefaona rehetra)
Para zezika roa 4 tsy maintsy mandoa vola kely kokoa isika, satria tena vao haingana ary i Snoy no marika tokana mivarotra azy ireo.
Azonao atao ny misafidy ny safidy kaopy suction ofisialy hampiasa ny XPeria Z sy Playstation Remote, izay manodidina ny € 30:
Manantena isika fa ny lalao kely kokoa dia hampiasa an'ity API ity ary afaka mahazo tombony betsaka amin'ireo accessories ireo isika. Hiezaka izahay haka vitsivitsy amin'izy ireo mba hanoro anao ny fomba fiasan'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Controllers for All, ampiasao ny remote console anao amin'ny iOS
Jesus Gonzalez dia hoy izy:
amin'ny amazona dia misy iray tena mitovy amin'ny an'ny Xbox iray eo amin'ny € 25 na zavatra toa izany.
Valiny tamin'i Jesús González
Brayar Alvites Atencio dia hoy izy:
Valiny tamin'i Brayar Alvites Atencio
Facundo Casal Despres dia hoy izy:
Naa tsara izany
Mamaly an'i Facundo Casal Després
Chinocrix dia hoy izy:
milalao snes, ps1, n Nintendo 64 ary nintente ds lalao amin'ny iphone-ko miaraka amin'ny ps3 controller na amin'ny écran io ihany aho. Manana 5s aho miaraka amin'ny ios 8.1.2
Valiny ho an'i Chinocrix
Micro dia hoy izy:
Miasa amin'ny iOS 9.2
Mamaly an'i Micro
Tapitra ny varavarankely raha misy manana azafady